Vaovao - Nanasonia fifanarahana iray i China sy i Nouvelle Zélande tamin'ny fanavaozana ny fifanarahana fivarotana malalaka (FTA) 12 taona
Sina sy Nouvelle Zélande tamin'ny talata teo dia nanao sonia protokolà amin'ny fanatsarana ny fifanarahana fivarotana malalaka (FTA) 12 taona, izay antenaina hitondra tombony bebe kokoa ho an'ireo orinasa sy vahoaka amin'ireo firenena roa tonta.
Ny fanavaozana ny FTA dia manampy toko vaovao momba ny e-varotra, ny fividianana governemanta, ny politikam-pifaninanana ary koa ny tontolo iainana sy ny varotra, ankoatry ny fanatsarana ny lalàna niaviany, ny fomba fanao ary ny fanamorana ny varotra, ny sakana ara-teknika amin'ny varotra sy ny varotra amin'ny serivisy. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ara-toekarena feno, i Sina dia hanitatra bebe kokoa ny fisokafany amin'ny sehatra misy ny fiaramanidina, ny fampianarana, ny vola, ny fikolokoloana ny zokiolona ary ny fitaterana mpandeha ho any Nouvelle-Zélande hampisondrotra ny varotra amin'ny serivisy. Ny FTA nohavaozina dia hahita ny firenena roa hanokatra ny tsenany amin'ny vokatra hazo sy taratasy sasany.
Hampidina ny tokonam-baravarana hijerena ny fampiasam-bola sinoa i Nouvelle Zélande, hahafahany mahazo fitsaboana mitovy amin'ny mpikambana ao amin'ny Fifanarahana Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Izy io koa dia nampitomboina avo roa heny ny quota ho an'ny mpampianatra sinoa sinoa sy ny mpitari-dia sinoa miasa ao amin'ny firenena ho 300 sy 200, avy.
Ny toekarena amerikana dia nifanena 3,5 isan-jato tamin'ny taona 2020 tao anatin'ny fihenan'ny COVID-19, ny fihenan'ny vokatra an-tsokosoko amerikana (PDP) lehibe indrindra isan-taona hatramin'ny 1946, raha ny angom-baovao navoakan'ny departemantan'ny varotra amerikana tamin'ny alakamisy.
Ny tombana ny fihenan'ny harin-karena faobe ho an'ny taona 2020 no fihenam-bidy voalohany indrindra hatramin'ny nahalavoan'ny 2.5% tamin'ny 2009. Izany no fihemorana lalina indrindra isan-taona hatramin'ny nihenan'ny 11,6% ny toekarena tamin'ny 1946.
Ny angon-drakitra koa dia naneho fa ny toekarena amerikana dia nitombo tamin'ny taha 4 isan-jato isan-taona tamin'ny telovolana fahefatra teo am-pisondrotana tranga COVID-19, miadana kokoa noho ny 33,4 isan-jato tamin'ny telovolana teo aloha.
Nidina an-tsokosoko ny toekarena tamin'ny volana Febroary, iray volana talohan'ny nanambaran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa areti-mandringana ny Covid-19.
Ny toekarena dia nifanaraka tamin'ny fitanana an-tsoratra taorian'ny famoahana 31,4% tamin'ny telovolana faharoa ary nitombo isa 33,4% tao anatin'ny telo volana.
Ny tatitra tamin'ny alakamisy dia ny tombana voalohany tamin'ny fitomboan'ny departemantan'ny varotra ho an'ny telovolana.
"Ny fiakaran'ny harinkarena fahefatra fahefatra dia nitaratra ny fanarenana ara-toekarena hatrany amin'ny fihenan'ny fihenan'ny fiandohan'ny taona sy ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19, ao anatin'izany ny fameperana sy ny fanidiana vaovao izay nanjary nanan-kery tany amin'ny faritra sasany tany Etazonia," Nilaza ny departemanta tamin'ny fanambarana iray.
Na eo aza ny fiakarana ara-toekarena ampahany tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taon-dasa, ny toekarena amerikana dia nihena 3,5 isan-jato nandritra ny taona 2020, raha ampitahaina amin'ny fisondrotana 2.2 isan-jato tamin'ny taona 2019, hoy ny departemanta.